သဲကုန်းမြို့နယ် လယ်သမားများ ထွန်တုံးတိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲ | ဧရာဝတီ
သဲကုန်းမြို့နယ် လယ်သမားများ ထွန်တုံးတိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲ
ငြိမ်းငြိမ်း| December 4, 2012 | Hits:105
20 | | အောင်ကုန်းရွာတွင် လယ်သမား ယနေ့ ထွန်တုံးတိုက်ပွဲဝင်နေစဉ်(ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
ပဲခူးတိုင်း သဲကုန်းမြို့နယ်မှ လယ်သမား ၁၅၀ ခန့်သည် အသိမ်းခံထားရသည့် လယ်မြေများ ပြန်လည်ရရှိရေး အတွက် ယနေ့မှ စတင်ကာ ထွန်တုံး တိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲကြသည်။
ပဲခူးတိုင်း ပြည်ခရိုင် သဲကုန်းမြို့နယ် အုတ်ဖိုအုပ်စု အောင်ကုန်းကျေးရွာက လယ်ဧက ၁၁၀၀ ကျော်ကို ၂၀၀၀ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်မြို့ရှိ သမ (၃) လီမိတက်က သိမ်းယူခဲ့သည့်အတွက် ထိုလယ်မြေများ ပြန်လည်ရရှိရန် တိုက်ပွဲဆင်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း လယ်သမားများက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
အောင်ကုန်းရွာအပါအ၀င် ရွာ ၈ ရွာမှ လယ်သမားများ စုပေါင်းပြီး လယ်မြေများ ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် နွေစပါး စိုက်ပျိုးရန် ထွန်ယက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း လယ်သမားတဦးလည်းဖြစ်၊ သဲကုန်းမြို့နယ် လယ်သမား အထောက်အကူပြု ကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင် တဦးလည်း ဖြစ် သည့် ကိုအုန်းဟန်က ဆိုသည်။
“ကျနော်တို့ ကျွဲသုံးရှဉ်းနဲ့ ထွန်တယ်။ ဓားတွေ ပေါက်ပြားတွေနဲ့ မြက်တွေကို ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းတယ်။ ကျနော်တို့လယ်တွေကို သီးစား ပြန်ချထားတဲ့ အကွက်တွေပေါ်မှာ ထွန်နေတာခင်ဗျ”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
၁၉၈၁ ခုနှစ်က ဆောက်လုပ်ခဲ့သည့် ၎င်းတို့ ကျေးရွာအနီးမှ အင်းမ ရေထိန်းတမံကို လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်နှစ်ကျော်က အနီးဝန်းကျင် ကျေးရွာများရှိ ရေလွှမ်းလယ်မြေများကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အာဏာပိုင်များက သိမ်းဆည်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများ က ဆိုသည်။
“ကျနော်တို့ လယ်ဧက ၁၁၆၀ ကို ရေလွှမ်းတဲ့ နေရာတွေဖြစ်လို့ဆိုပြီး ၂၀၀၀-၂၀၀၁ တုန်းက သမ (၃) က အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ပေါင်းပြီး သိမ်းသွားခဲ့တာ။ ကျနော်တို့ လယ်တွေကို သိမ်းတုန်းက စပါးစိုက်ဖို့ဆိုပြီးသိမ်းတယ်။ နောက် သူတို့က မိုးရာသီမှာ အင်းမ တမံ ကနေ ရေလွှမ်းမိုးတော့ စပါးစိုက်မရဘူး။ ငါးကန်တွေ လုပ်ပစ်လိုက်တယ်။ နွေရာသီကျတော့ ကျနော်တို့ကို သီးစားပြန်ချတယ်။ သီးစားခက လယ် တဧကကို စပါးတင်း ၂၀ ပေးရတယ်”ဟု ကိုအုန်းဟန်က ဆက်ပြောသည်။
ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီခန့်တွင် မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ရဲမှူး တင်ထွန်း နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၂ ဦးက ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှု ရပ်တန့် ရန် လာရောက် ဟန့်တားခဲ့သော်လည်း တစုံတရာ နှောင့်ယှက်မှု မရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ရဲက လယ်သမားတွေ ဒီ လယ်မြေတွေကို အမှန်တကယ် ပိုင်ဆိုင်တာဆိုရင် တရားဝင်စာပို့ပြီး လုပ်ဆောင်ဖို့ ပြောပါတယ်”ဟု လယ်သမားအရေး ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနေသူ ကိုမင်းမင်းက ဧရာဝတီကို ပြောပြသည်။
လယ်သမားများက ၎င်းတို့အနေဖြင့် ၁၉၈၃ ခုနှစ်က လယ်မြေပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အထောက်အထားပြေစာများရှိကြောင်း၊ ယင်း ပြေ စာများ အရ လယ်ယာမြေများကို ၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း လယ်သမားများက ပြောဆိုသည်။
ယမန်နှစ် မတ်လ နှင့် သြဂုတ်လများတွင် သမ္မတထံ တိုင်ကြားခြင်းနှင့် အသနားခံစာများ တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့သည့် အပြင် ပြီးခဲ့ သည့် ဇူလိုင်လ ကလည်း သဲကုန်းမြို့တွင် ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ခဲ့ကြကြောင်း၊ သို့ရာတွင် အာဏာပိုင်များဘက်မှ တစုံတရာ အရေးယူမှု မရှိခဲ့ကြောင်း ကိုမင်းမင်းက ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ကို ဒီလယ်မြေတွေပေါ် ပြန်လာထွန်လို့ ကျနော်တို့ကို နယ်မြေကျူးကျော်မှုနဲ့ တရားစွဲမယ်ဆိုရင်လည်း ကျနော်တို့ တရားရုံးမှာ ဖြေရှင်းဖို့ အသင့်ပါပဲလို့ ရဲမှူးကို ကျနော်ပြောခဲ့ပါတယ်”ဟု ကိုအုန်းဟန်က ဆိုသည်။
အသိမ်းခံလယ်ယာမြေများ ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် ထွန်တုံးတိုက်ပွဲများကို ယခုနှစ် ဇူလိုင်လက မိတ္ထီလာမြို့နယ်တွင်လည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြကြောင်း၊ ယင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွင် လယ်သမားများအား နယ်မြေကျူးကျော်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခြင်းများ ရှိခဲ့သည်။
စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ် မူကြမ်း ထုတ်ပြန်
သီလ၀ါ စက်မှုဇုန် စီမံကိန်း နယ်မြေပေါ်တွင် နေထိုင်သူများ ပြောင်းရွှေ့ရတော့မည်
စစ်တပ်သိမ်း လယ်မြေများ ပြန်လည်ရရှိရေး ပန်းတောင်း လယ်သမားများ ဆန္ဒပြ
သိမ်းထားသည့်လယ် ဧက ၅၀ ကျော်ကို မက်စ် (မြန်မာ) က ပြန်ပေးမည်
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment Salai Lian December 4, 2012 - 10:44 pm	Endless mess improperly caused by the government is now haunting the government back. Seizing land is causing nationwide nightmare. Government may think it can do whatever it wants but in the democratic society, the government can be fought back with the legal means. Mr President will need to solve unending messes from the previous military dictatorship.